Alarobia 31 Martsa 2021 – FJKM
Iray amin’ireo taratasy nosoratana ho an’ny Fiangonana fito tany Azia Minora ity ho an’i Filadelfia ity . Tsy mba nitovy amin’ny taratasy hafa anefa ity ho an’i Filadelfia ity , satria ny Tompo dia tsy nanome tsiny na fampitandremana ny Fiangonana fa fankasitrahana sy fampaherezana aza no hita ao .Tsy nahitana fanenjehana ny kristiana avy tamin’ny fahefana Jentilisa tao na koa fampianaran-diso atao amin’ny Fiangonana fa avy amin’ireo milaza azy ho Jiosy no niavian’ny fahasarotana niainan’ny Fiangonana . Manoloana izany ,Andriamanitra dia milaza fa :
1-Mahafantatra ny zavatra rehetra
And 8 : « fantaro ny asanao ». Tsy misy zavatra miafina amin’ny Tompo akory izay rehetra mitranga amin’ny fiainan’ny olona sy izay rehetra ataony koa . Hoy ny mpanao salamo hoe : avo fitoetra Izy , nefa iva fijery , izany hoe : tena mahafantatra ny olona na dia misy mihevitra aza hoe : tsy misy mahita izay ataony irery .Aseho eto fa na inona na inona nisy tamin’ny Fiangonana tao Filadelfia dia niezaka nitandrina ny Tenin’ny Tompo izy ary tsy nandà ny Anarany mihitsy , izay kely nananany no nampiasainy hahamarina azy eo anatrehan’ny Tompo ary nankasitrahan’ny Tompo indrindra izany .
2-Miaro izay mihevitra Azy ny Tompo
Raha ny zavatra miabo mba ananan’ny Filadelfia dia kely ihany . « hery kely » ( and8 ) . Mety tsy hahafahana manao na inona na inona izany , nefa noho ny fitiavan’ny Tompo azy , vokatry ny fijoroany hanaiky ny Tompo dia vonona hiaro azy Izy mba hahajoro amin’ny fakampanahy maro . Noho ny ady tsaran’ny finoana nananan’ny Fiangonana dia mahita vokatsoa avy amin’ny Tompo izy ireo .
Misy zavatra tsara ve ka tokony ho faka tahaka tamin’ny Fiangonana tao Filadelfia ?